Su'aalaha la isweydiiyo - Kooxda Caalamiga ah ee PEIXIN
1. Waa noocee adeegga iyo daryeelka macaamiisha ee PEIXIN Group ay bixiso markay tahay xagga tababarka?
Waxaad u diri kartaa farsamoyaqaan warshaddeenna si aad ugu tababarto sida ay u shaqeeyaan mashiinka ka hor dhalmada goobta soo-saarkaaga. Shirkaddeena ayaa ku
● Haddii aad u baahan tahay hal farsamo yaqaan si uu kuu shaqeeyo muddo dheer waqtiga, waxaan kaa caawin karnaa shaqaalaynta shaqaale khibrad leh
2. Baadhitaanka ashyaa'da cayriin wali ma dhamaan. Hadday suurtagal tahay, miyaad naga caawin kartaa xulashada alaab-qeybiyeyaal alaab tayo leh oo tayo sare leh?
● Haa, waan kaa taageeri karnaa sidii aad u heli lahayd alaab-qeybiyeyaal tayo sare leh oo ceeriin ah suuqyadeena
● Waan kula tegi karnaa si aan u booqanno wershadohooda si aan u eegno tayadooda
also Waxaan sidoo kale kula xiriiri karnaa alaab-qeybiyeyaasha ka socda suuqa dibedda ka ah.
3. Waxaan rabaa in aan furo warshad soo saarta xafaayadda dhallaanka, miyaad i siin kartaa talo?
Haa waxaan kaa caawin karnaa inaad falanqeeyso qiimaha muunad xafaayadda dhallaanka laga qaado oo laga soo qaado suuqa deegaankaaga
● Waxaan ku siin doonnaa warbixinnada qiimaha si faahfaahsan iyadoo loo eegayo muunaddaada, Thanks taas oo aad si fudud u xisaabin karto qiyaasta faa'iidooyinka
4. Waa maxay arrimaha aan tixgaliyo ka hor intaanan aasaasin warshad dhaybar ilmaha?
Waa inaad ogaataa jawaabaha su'aalaha soo socda
● Immisa xabbadood oo xafaayad ah ayaad u baahan tahay inaad soo saarto bil kasta si aad ugu qanciso qorshahaaga suuqgeynta iyo ujeeddooyinkaaga ganacsi?
● Imisa jeer oo socod ah maalintii ayaad rabtaa inaad ordo?
● Intee in le'eg oo awoodda la rakibay ayaa kugu habboonaan doona inaad shaqeyso?
● Maxay yihiin astaamaha loo baahan yahay xafaayadda aad u baahan tahay inaad soo saarto?
5. Miyaad soo bandhigi kartaa mashiinka ku rakiban habka orodka?
Si diirran ayaa lagugu soo dhoweynayaa inaad soo booqato warshaddeenna. Waxaan ku tusi doonaa sida mashiinku ugu shaqeynayo goobta waxaan sidoo kale ku tusin karnaa sida mashiinkaagu ugu shaqeynayo mid ka mid ah warshada macaamiisheena gudaha haddii aad xiisaynayso
6. Maxaan u doortaa mashiinkaaga?
Have Waxaan haysanaa 30 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan soo saarista mashiinnada wax soo saarka nadaafadda
● Waxaan ku guuleysannay in aan gaarno
● Waxad is barbardhigi kartaa dhimaya farsamo ee mashiinada our kasoo horjeeddo qalabka qeybiyeyaasha kale '- waxaad ogaan doontaa in horumarinta farsamada iyo qiimaha mashiinada waxaa aad u soo jiidasho
● dayactir in mashiinada waxaa soo saaray iyadoo la isticmaalayo CNC / tiro computer xakamaynta / leh saxnaanta sare, waxay ka dhigeysaa makiinado dheeri ah oo ay ku sii xasilloon yihiin orodka xawaaraha sare